mairie-antananarivo – Fanadiovana faobe Andravoahangy
Fanadiovana faobe Andravoahangy
Araka ny vina ny Ben’ny Tanàna Lalao Ravalomanana dia anisan’ny atao laharam-pahamehana ny fahadiovana ny tanàna eto Antananarivo Renivohitra. Ka androany 12 martsa 2018 dia nanatanteraka fanadiovana faobe tetsy Andravohangy ny Boriboritany fahatelo izay notarihan’ny Delege Rado Andrimamonjisoa sy ireo ekipany miaraka amin’ny polisy Monisipaly.
Nanomboka tamin’ny 7 ora maraina ny fanadiovana, manoloana tetsy amin’ny poste Andravohangy hatrany amin’ny Mascar manolona ny CSBII; nanala ireo mpivarotra amoron-dalana sy nanadio ny toerana rehetra ary nampiditra azy ireo ao anatin’ny tsena. Nisy koa ny fanentanana an’ ireo mpivarotra anatiny ao amin’ny “étales” mba hanala ireo entana mibaha toerana mba idiran’ny mpivarotra sasany. Noesoriana dahalo koa ireo mpivarotra mibahana manolona ny CSBII ary nidiovin’ny kaominina ihany koa izany toerana izany. Izay efa nahitana loto mitambatra mahatratra 25 cm ny ahavony. Mbola nisy ny fanasana nataon’ny mpamonjy voina ny toerana voadio rehetra.
Nanambara ny Delegen’ny Boriboritany fahatelo fa ny tanjona dia madio ny tsena sy ny mpivarotra ary miaina ao anatin’ny fahadiovana ny mpividy ary tsy hisy ny hotrik’aretina. Noho izany dia tazomina mandrakariva izany fahadioavana izany fa tsy atao vonjy tavanandro fotsiny. Ary manomboka izao h dia hisy ny vahaolana eo amin’ ny “parking”. Hisy ny “parking” voatokana ho an’ireo mpividy ao amin’ny “art Malagsy “ sy ny mpivarotra ao amin’ny “étale” sy ny manodidina. Voafehy koa ny fandriam-pahalemana“securité” ao an-tsena Andravohangy satria efa hisy ny olona voatokana amin’izany ka tsy misy hatahorana intsony ny sitomahery.